Wiil yar oo mudaaharaadayay oo lagu dilay Venezuela - BBC News Somali
13 Abriil 2017
Mudaaharaadyo maalmo socday ayaa ka dhacay dalka Venezuela
Wiil yar oo mudaaharaaadayay ayaa lagu dilay dalka Vanezuela, iyadoo ay ka sii darayaan xiisadda siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee dalkaas ka taagan.
Wiilkan oo 14 jir ah iyo qof kale oo mudaaharaadayay ayaa toogasho lagu dilay habeenimadii Talaadada iyaga oo ku sugan magaalada Barquisimeto.
Gafernatooraha deegaankaas ayaa arrintan ku eedeeyay dad taageersan dawladda oo hubaysnaa, labadan arday waxaa la dilay intii uu socday mudaaharaadkii todobaadkii hore.
Wadahadallada Venezuela oo fashilay
Madaxweyne Maduro oo sheegay in uu ka hortagay afgambi
Mudaaharaadyadan cusub ee dawladda lagu diidan yahay ayaa billawday ka dib markii ay dawladdu go'aamisay Jimcihii in hogaamiyaha mucaaradka Henrique Capriles uusan hogaanka dalka u tartami karin muddo 15 sano ah.
Dhageyso, Wareysi: Madaxweynaha dowlad deegaanka iyo fariintiisa ciida